विदेशबाट उद्वारगरि ल्याइएकाहरुलाई बोकेर धनगढी जादै गरेको बस दुर्घटना, केछ अवस्था ? – Jagaran Nepal
विदेशबाट उद्वारगरि ल्याइएकाहरुलाई बोकेर धनगढी जादै गरेको बस दुर्घटना, केछ अवस्था ?
काठमाडाैं । विदेशबाट उद्वारगरि ल्याइएकाहरुलाई बोकेर धनगढी जादै गरेको बस दुर्घटनामा परेको छ । काठमाडौंबाट धनगढीका लागि छुटेको बा ५ ख ८०७० नम्बरको बस नवलपरासीको चोरमारामा दुर्घटनामा परेको हो ।
तीव गतिका कारण उक्त दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ । दुर्घटनामा परि दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् । उक्त बसमा दुवई, कतार र साउँदी अरबबाट आएका १८ जना सुदूरपश्चिम फर्किरहेका थिए । थप विवरण आउन बाँकि छ ।
यसैबीच लकडाउनका वेला पनि सवारी पासविनै महँगो भाडा लिएर यातायात व्यवसायीले गाडी चलाउने गरेको खुलेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटले नेपालगञ्ज र झापाबाट आएको तीन वटा गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै सार्वजनिक यातायात चलाइन थालिएको खुलेको हो ।
श्रेष्ठका अनुसार आइतबार बाँकेको नेपालगञ्ज–६ घर भएका राहुल डबरगर, सनुसरीका राकेश शाक्य, बाँकेका रुद्रबहादुर खत्रीवरिद्ध मुद्दा चल्ने भएको हो । डबगरले नेपालगञ्जबाट बा ४ ख ४५८० नम्बरको हाइस गाडीमा ८ जना यात्रु बोकेर काठमाडौंसम्म ल्याएका थिए भने शाक्यले १९ जना यात्रुलाई ना ५ ख ५८३४ नम्बरको यात्रुवहाक बसमा काठमाडौं ल्याएका थिए ।
विदेशमा अलपत्र ६ सय ८१ नेपाली आज स्वदेश फर्किँदै, कुन देशबाट कति (सूचीसहित)
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका ६८१ नेपाली आज स्वदेश फिर्ता हुने भएका छन् । भित्रुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार बहराइनबाट १ सय ५० जनालाई लिएर नेपाल एयरलाईन्सको उडानबाट बिहान ८ बजेर १० मिनेटमा आउने छ ।
दिउँसो पौने दुई बजे पाकिस्तानबाट ७५ जनालाई लिएर हिमालयन एयरलाईनसको विमान आउने छ । त्यस्तै माल्दिभसमा रहेका १ सय ५६ जनालाई लिएर हिमालयन एअरलाईन्सकै विमान आउँदै छ ।
एयर अरेवियाको विमानबाट संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई)बाट १ सय ५० नेपाली स्वदेश फर्किनेछन् । यसैगरी कुवेतबाट जजीरा एयरको विमानले १ सय ५० जनालाई नेपाल ल्याउने तालिका रहेको छ ।
सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा परेका नेपालीहरुको उद्दार जारी राखेको छ । नेपाल फर्किनेहरुको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाहरुलाई मात्र स्वदेश फर्काइने छ ।